နိုင်ငံတကာ နည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အဆင့်မြင့်နှင့် ကွန်ဒို အဆောက်အအုံတိုင်းတွင် စြာ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတကာ နည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အဆင့်မြင့်နှင့် ကွန်ဒို အဆောက်အအုံတိုင်းတွင် စြာ??
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၁
စာကြည့်တိုက်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အဆင့်မြင့်နှင့်ကွန်ဒိုအဆောက်အအုံတိုင်းတွင် စာကြည့်တိုက်တစ်ခုပါဝင်လာအောင် မကြာမီဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစကားဝိုင်းတွင် ဦးဟိန်းလတ်ကပြောသည်။
အဆိုပါစကားဝိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များ ဖောင် ဒေးရှင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)မှ ကြီးမှူး၍ Save the Library စာကြည့်တိုက်များကွန်ရက်နှင့် မိတ်ဖက်စာပေအဖွဲ့အစည်းများမှပူးပေါင်း ကာမတ်လ ၁၁ ရက်က သိမ်ဖြူလမ်းစာအုပ်တန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များ ဖောင်ဒေးရှင်း (ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး)မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံရာတွင်လည်း ယင်းကိစ္စကိုပြောခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ ကျွန် တော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာ မြို့နယ် တွေမှာ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုကြီးတွေကိုဆောက်မယ်။ ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးတဲ့အခါမှာ စာကြည့်တိုက်မဆောက် မဖြစ်ဆောက်ရမယ်။ အဲဒီအဆောက်အအုံထဲမှ စာကြည့်တိုက်အခန်းတစ်ခုမပါမနေလုပ်ရမယ်။ စာကြည့်တိုက်ရန်ပုံ ငွေလည်း ကွန်ဒိုတည်ဆောက်သူ တွေကလှူဒါန်းရမယ်။ သူကအဲဒီလိုပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေက ရပ် ဆိုင်းထားတာရှိတော့ မပါသေးပါဘူး။ နောက်နှစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မြို့နယ်တွေမှာ ဆောက်မယ့်ကွန်ဒိုတွေမှာ စာကြည့်တိုက်ပါပါမယ်။ ဒါကနောင်လာမယ့် အလားအလာတွေဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များဖောင်ဒေးရှင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံ) ဦးဟိန်းလတ်က ပြောသည်။
”နိုင်ငံတကာမှာ Shopping Mall ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ အဆင့်မြင့် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံကြီးတွေဆောက်ရင် စာကြည့်တိုက်မပါရင်မရဘူး။ ပေးမဆောက်ဘူး။ ဥပဒေထဲမှာပါတယ်။ ကွန်ဒိုအဆာက်အအုံတွေဆောက်ရင် သူတို့ဆီက စည်ပင်ကစာကြည့်တိုက်ပါကိုပါရမယ်။ မပါရင် ဆောက်ခွင့်မပြုဘူး”ဟု ဦးဟိန်းလတ်က ဆက်လက်ပြောသည်။ စာကြည့်တိုက်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်များ၊ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်များ၊ အထူးစာကြည့်တိုက်များ၊ ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်များကို တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခြေခံပညာမူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းများတွင်လည်း စာကြည့်တိုက်များထားရှိခြင်း ကလေးငယ်များကို စာဖတ်သည့် အလေ့အကျင့်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း နှင့်စာဖတ်လျှင် အမှတ်များများရသော စာမေးပွဲစနစ်များပြောင်း လဲခြင်းများဆောင်ရွက်ရန် စကားဝိုင်း၌ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
”ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ စာကြည့်တိုက် ၃ဝ ကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု Save the Library စာကြည့်တိုက်များ ကွန်ရက်ဦးဆောင်သူ ကိုမောင်မောင်စိုးကပြောသည်။ ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစကားဝိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ စာ ကြည့်တိုက် ၃ဝ ကို ငွေသားကျပ် လေးသောင်းပေးလှူပြီး မိမိတို့စာကြည့်တိုက်အတွက် လိုအပ် သောစာအုပ်များကို စိတ်တိုင်းကျဝယ်ယူစေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နတ်ပွဲသွားစဉ် နေအိမ် မီးကြွင်း မီးကျန်မှ တစ်ဆင့် မုံရွာစက်မှုဇုန် အနီး ကျူးကျော်တဲ သုံးလုံး
ဝေဖန်မှုများကို ဂရုမစိုက်ကြောင်း မော်ရင်ဟို တုံ့ပြန်
မကွေး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြစ်ချောင်းများမှ ကျောက်စရစ်နှင့် သဲများထုတ်ယူနေခြင်းကို ကော်မ?
မူဆယ် (၁ဝ၅) မိုင်ရှိ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားသည့် အရှေ့မြောက်တံခါး အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ သစ??
အလုပ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတမှုမရှိဟုဆိုကာ မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ အလယ်တန်းပြဆရ
လိုင်စင်မဲ့ ယာဉ်များကို အရေးယူတော့မည် ဟူသော သတင်းကြောင့် မန္တလေးမြို့ရှိ ပရဟိတ နာရေးကူညီမှု ?